တရုတ်စမတ်ဖုန်းရောင်းအား ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်း | Androidsis
တရုတ်နိုင်ငံတွင် Samsung စမတ်ဖုန်းရောင်းချမှုသည် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့သည်
Samsung သည်တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအရကောင်းကောင်းလည်ပတ်နေပြီး၊ Galaxy S8 နှင့် S8 Plus အသစ်များသည်အောင်မြင်မှုရနေပုံရသည်။ တကယ်တော့ Counterpoint ရဲ့အစီရင်ခံစာအရ တရုတ်နိုင်ငံရှိ Samsung ၏စမတ်ဖုန်းရောင်းချမှုသည်ယခုနှစ်ပထမသုံးလပတ်တွင် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကျဆင်းခဲ့သည်.
တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီကြီးသည်စမတ်ဖုန်း ၃.၅ သန်းရောင်းချခဲ့သည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က 3,3% နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သာ 8,6% စျေးကွက်ဝေစုရရှိခဲ့သည်.
၎င်းသည်နောက်ကွယ်မှလာသောလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုအတည်ပြုသည်။ Samsung ကသူတို့ရဲ့စမတ်ဖုန်းတွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာရောင်းတဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ယှဉ်ပြိုင်ဖို့အခက်တွေ့နေတယ်။ ထိုကုမ္ပဏီများအနက် Huawei၊ Oppo နှင့် Vivo တို့သည်ရောင်းအား ၂၅%၊ ၈၁% နှင့် ၆၀% အသီးသီးတိုးပွားလာသည်။
Huawei သည်အကြီးမားဆုံးရောင်းချသူဖြစ်လာသည် စျေးကွက်ရှယ်ယာ ၁၉.၇ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ၂၀၁၇ ပထမသုံးလပတ်အတွင်းတရုတ်တွင်စမတ်ဖုန်းများ ဒုတိယနေရာတွင်စျေးကွက်ရှယ်ယာ ၁၇.၅% နှင့် Oppo က Vivo ၁၇.၁% ဖြင့်ဒုတိယနေရာတွင်ရှိသည်။
အထူးကုဆရာဝန်များအဆိုအရဒီတရုတ်ကုမ္ပဏီသုံးခုဟာကျေးဇူးတင်ပါတယ် ပိုမိုတတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းများ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ဖြန့်ဖြူးသောလမ်းကြောင်းများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုခြင်း။ ဒါကိုဆန့်ကျင်။ Samsung စမတ်ဖုန်းများသည်ဈေးပိုကြီးပြီးအွန်လိုင်းလက်လီအရောင်းဆိုင်များတွင်သာရနိုင်သည်။
အရှင်, Samsung မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကသိပ်ကိုတောက်ပနေမှာမဟုတ်ပါဘူးe) အနည်းဆုံးယခုအချိန်တွင်ကုမ္ပဏီသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးစမတ်ဖုန်းဈေးကွက်တွင်သက်ဆိုင်သည့်ကစားသမားတစ် ဦး ဖြစ်လိုပါကအသုံးပြုသူများကိုပိုမိုစိတ် ၀ င်စားစေမည့်ပုံသေနည်းကိုရှာဖွေရမည်။
တရုတ်စားသုံးသူတွေဟာအနောက်တိုင်းသုံးစွဲသူတွေထက်စျေးနှုန်းကိုပိုပြီးအထိခိုက်မခံတဲ့အတွက် \_ t Samsung ကပိုမိုပြင်းထန်သောစျေးနှုန်းမူဝါဒကိုပြုလုပ်ရန်ရှိသည် မဟုတ်ပါက၎င်းသည် Huawei၊ Vivo နှင့်အခြားထုတ်လုပ်သူများ၏တိုးတက်မှုကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပါ။
အိန္ဒိယတွင်တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သည့် Lenovo, OnePlus, Gionee နှင့် Xiaomi စသည့်တန်ဖိုးနည်းသောတရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်စစ်တိုက်ရာတွင်ရှုံးနိမ့်နေပုံရသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » တရုတ်နိုင်ငံတွင် Samsung စမတ်ဖုန်းရောင်းချမှုသည် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့သည်
Galaxy Launcher သည် Samsung ၏ Touchwiz ကိုသင်၏ Android တွင်ကောင်းမွန်စွာတုပနိုင်သည်
Nubia Z11, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်အမြင်